Ukufika ku-Google Phezulu ngeSemalt
Isikhala esiku-inthanethi sichaza imithetho yaso. Ukwenza ibhizinisi kwi-Intanethi akufani nokwenza ibhizinisi emhlabeni wangempela. Kokubili kulula futhi kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Uma ungayazi imithetho yaleli zwe, uzophuma ngewindi. Uma usebenzisa ukwenziwa kwe-SEO, ibhizinisi lakho lizosebenza njengewashi. Uma ungumnikazi webhizinisi, umhlaziyi webhizinisi, noma uchwepheshe wokukhangisa, ungahle ube nentshisekelo yokufunda ngezindlela ezintsha zokusebenzisa kahle amathuluzi e-web. Noma yiluphi uhlobo lokwenza imali, uma kungokomthetho, lungaqiniswa, luthuthukiswe, futhi luthuthukiswe uma uyazi imithetho yendawo ebonakalayo.
Ngingakwazi ukukhuthaza ibhizinisi online?
Uzwe izindaba zabantu abaqale ibhizinisi labo le-Intanethi kusuka ekuqaleni. Mhlawumbe laba bantu abajabule bathola ngengozi imithetho yokukhuthaza ku-World Wide Web. Ingabe unokuqonda futhi uhlakaniphile ukukhulisa ngokuzimela ithrafikhi yenethiwekhi ye-e-commerce? Yini usomabhizinisi we-novice okufanele ayazi? Ungasitholaphi ugqozi lokuzalwa kwamaphrojekthi angajwayelekile? Ukucinga imininingwane, uya kwizinsiza ze-Intanethi ezahlukahlukene. Ukufiphala kwazo zonke izinhlobo zolwazi kuzokwehlela. Uzoshona ku-intricacies kanye nama-nuances, futhi ngaphambi kokuthola noma yiluphi ulwazi, uzobe udumele amahlandla ayikhulu esikhaleni esibonakalayo namathuba ayo angenamkhawulo.
Yebo, le ndlela kungenzeka futhi. Ungaphothula izifundo zomuntu ngamunye, uyikhokhela ngepeni enhle. Yini oyitholayo njengomphumela? Inqwaba yolwazi eluhlaza okudingeka ukuthi isetshenziswe ezimweni ezingekho ezijwayelekile ezichazwe kunoma iyiphi incwadi. Futhi, uzophendukela kuthisha wakho, ozokunikeza impendulo engacacile. Ngani? Kungaba kude nezimo zangempela. Uzolahlekelwa yini? Uzolahlekelwa izinsuku nezinyanga eziyigugu. Lesi yisikhathi samathuba akho aphuthelwe. Ngani? Ibhizinisi lakho lizosetshenziswa, futhi kuzofanela ubheke imibono emisha namathuba amasha. Ingabe usukulungele lelo themba?
Amathuluzi Wenethiwekhi Yokuphumelela
Abathengi babheke ezitolo eziku-inthanethi ngohlobo lokuthenga abanalo emhlabeni wangempela. Zidinga indlela yomuntu ngamunye nokuxhaswa kwengqondo. Kodwa umane nje awunakukwazi ukwenza zonke izivakashi esitolo sakho esibonakalayo, ikakhulukazi uma zifika ngasikhathi sinye. Uma ungakwazi ukuthola ukuzethemba kwamakhasimende ngendlela yemvelo, amaqhinga okuthengisa ngeke anganakwa. Kungakho usomabhizinisi eku-inthanethi edinga abantu abanolwazi abazokuphatha isici somuntu, kanye namathuluzi okulawula asebenzayo.
Noma ngabe kukuqondiswa kwebhizinisi lakho, uzodinga isethi esebenzayo yamathuluzi we-SEO nabachwepheshe abazosiza ekuqhubeni ibhizinisi lakho. Ukuthengisa into ejwayelekile kakhulu kwi-Intanethi akulula njengoba kubonakala ekuqaleni. Okusho ukuthi, uma uzothengisa ifosholo eyodwa noma uhlelo olulodwa, uzokwenza kungekudala noma kamuva. Kepha manje sikhuluma ngokuthengisa okungapheli nokwandayo, okufanele uthole inzuzo yokuncintisana nokusekelwa kwamakhasimende okuphelele.
Ngokutholakala kolwazi olusobala nolusheshayo, isoftware yokuqala ibamba iqhaza elibalulekile ekuthuthukisweni kwebhizinisi. Impumelelo iya ngokuya ifinyelela ezinkampanini eziphakathi nendawo, futhi iziqalo zixakile ngenzuzo enhle. Amakhasimende angaba khona ahamba esihlahleni isikhathi eside. Kufanele ulungiselelwe izinkulungwane zabantu abanelukuluku elidlula. Umuntu angaheha iklayenti ngentshiseko empilweni yakhe yansuku zonke nezinkinga zakhe. Lo mqondo wokuxhumeka komkhiqizo udinga inqubomgomo ethile yokumaketha nokuzibandakanya kwakho okuqhubekayo. Amakhasimende angaba khona kufanele akhuliswe kahle, ehlakulela ukuzethemba kwawo kumkhiqizo wakho.
Hlangana neSemalt Web Service
Amathuluzi we-inthanethi angenhla azodonsa amakhasimende amasha futhi andise kakhulu imali oyitholayo. Inani labo likhulu kakhulu, kepha bonke abahambeli ngaphezu kwemingcele yesifunda esisebenziweyo. I-Digital Agency yethu ayinikezi abathengi bayo amathuluzi wokuthengisa hhayi kuphela, kodwa futhi necebo elizokuvumela ukukhulisa amandla enjini yokusesha. Uma ufuna ukuphuma esifundeni sakho, izwe, izwe, noma izwekazi, une-thuluzi elithembekile. Yisebenzise ukuze udume emhlabeni wonke.
I-Semalt izokuholela ezindleleni eziyimfihlo zezinjini zokucinga, ukhetha amagama angukhiye ahlobene ngqo nomsebenzi wakho wentengiso. Cishe ngaso leso sikhathi, uzothola yonke imininingwane edingekayo mayelana nomkhakha uwonke, ukusebenza kahle komncintiswano, nedumela. Uzokwazi ukubuka inqubekela phambili ezinkundleni zokuxhumana, ukhulisa ubukhona bakho njalo ngemizuzu eyodwa.
I-SEO ngeke ilahlekelwe ukuhambisana kwayo ekhulwini lamashumi amabili nanye. Kumayelana nethrafikhi yomkhiqizo ozotholwa ngumkhiqizo wakho ngezinjini zokucinga. I-Semalt izokusiza uthathe isikhundla esizinzile. Ukutshala imali okuncane nokubambisana okungapheli nochwepheshe bethu kuzonikeza umphumela omuhle. Amaphutha akho webhizinisi angaqedwa ngokuhlelekile. Okunye ukwehluleka kungenzeka, kepha isu elenzelwe kahle lingamelana nengcindezi yemakethe. Khetha isu elifana nemakethe yakho bese uliyela yona.
Ukubonakala kukaSemalt kwanqunywa kusengaphambili ngokuthuthukiswa kwe-Intanethi. Ubuchopho obuqhakazile abujwayelekile kangako, kepha uma beseqenjini elilodwa, kwenzeka isimangaliso. Isimangaliso senzeka ngonyaka ka-2013 lapho abantu abaningana impela bahlakanipha benquma ukujoyina amabutho futhi bakhe iSemalt. Le nkampani inabasebenzi bayo emhlabeni wonke. Namuhla, abafana abancane nabathembisayo abadingi ukuya kwenye indawo ukufakazela ubuhlakani babo. Ngamunye wabo unemfundo eyisisekelo namakhono kumaphrojekthi we-IT.
Ukuhlonza ibhizinisi lakho, awudingi ukuma ulayini. Asikho isidingo sokuphinda usebenzise isondo ukunquma ukwelashwa. Ukufika emiphumeleni ephezulu ye-Google, udinga ukuxhumana nezazi zeSemalt. Sine iphilisi elizoba nomthelela ekukhuleni kwakho. Ukwelashwa kwethu kuyasebenza, kungakhathalekile ubuzwe, izwe, noma izwekazi. Ngabe ufuna ukuthi i-smartphone yakho ithole izingcingo ezivela kumakhasimende ngokuqhubekayo? Ngabe ufuna ukuthi i-imeyili yakho igcwaliswe nsuku zonke ngamakhulu ama-imeyili angafundile? Ngabe ufuna ukukhulisa isilinganiso senkampani yakho sibe ngamamaki aphezulu kakhulu? Ngabe ufuna ukukhulisa iholo lakho ngababili, abathathu, njalonjalo? Konke kulula kakhulu. Uma usukulungele ukukhulisa ibhizinisi lakho, qhubeka ufunda le ndatshana.
Amathuluzi we-Semalt SEO asetshenziswa ngabathengi abavela emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Ukhuluma kabi isiNgisi? Abasebenzi bethu bazokhuluma ulimi lwakho lwendabuko. Kuwebhusayithi yenkampani, ungazi ngamunye wabo. Kukhona ukubuyekezwa kwamakhasimende okubonga. Lezi akuzona izindaba ezisunguliwe ezingenasisekelo sezinto ezibonakalayo. Wena ngokwakho ungavakashela izingosi zezinkampani eziphumelele ezasiza uSemalt ukuba achume:
UMSEBENZI WOKUZIPHATHA (Isikhungo Sese- Apple Service). Le nkampani yase-Ukraine yasebenzisa ithuba leSemalt FullSEO futhi yenyusa ithrafikhi yayo ephindwe kane ezinyangeni eziyi-10!
Zaodrasle.si. Isitolo sezocansi saseSlovenia online besinikeza imikhiqizo nezinsizakalo iminyaka eyisithupha. Ezinyangeni eziyishumi zokubambisana neSemalt, le sayithi inyuse usinga lokuhlola umzimba ngo-520%, futhi yandisa inani lokuvakasha ngenyanga ngayinye ngo-1216. Namuhla, iZaodrasle.si yinkampani ehamba phambili eSlovenia emkhakheni wayo.
Ingosi yokusesha nokuthenga ama-franchise. I-SEO Will Frankling ithi iphakethe le-FullSEO lisize ibhizinisi lakhe ukwandisa isibalo samagama asemqoka kuGoogle TOP-10 kuya ku-5782, kanye nokugcwala kwabantu ngama-303% ezinyangeni eziyi-9 zokuqala. Namuhla, le nkampani ingenye yezindawo zokuqala embonini yamasheya e-United Kingdom.
Noma yimuphi umsebenzisi we-Intanethi uyazi ukuthi iyini injini yokusesha. Impela usebenzise enye yazo. Namuhla ziningi zazo, kepha iGoogle iyona ethandwa kakhulu. Ngabe isebenza kanjani injini yokusesha? Ufaka isicelo futhi uthole uhlu lweziza ezitholwe yiGoogle, Rambler, noma i-Yandex. Qaphela ukuthi amanye amasayithi awa okokuqala, kanti amanye asala ngemuva kakhulu. Njengoba izibalo zibonisa, isabelo sebhubesi sabasebenzisi sivula kuphela izixhumanisi ezisezikhundleni zokuqala. Ukungena ku-TOP-10, kuzofanele wenze isethi yezinyathelo zokwandisa isikhundla sendawo ku-index-Google yemibuzo esasebenza ngaphambi kokusebenza.
Ukubandakanya amathuluzi we-SEO
Onjiniyela bakwaSemalt bayayazi indlela yokubeka isiza endaweni yokuqala kuGoogle TOP 10. Sizonyusa kakhulu ukuthengiswa komgwaqo nokuthengisa online. Ukuphromotha kwe-Intanethi kungasebenza kuzo ZONKE izinkampani ezinababukeli abangahle bafuna imikhiqizo noma izinsiza ezifanayo kwi-Intanethi. Ngokwezibalo, inani labasebenzisi be-Intanethi liyakhula minyaka yonke. Namuhla, ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu yezakhamuzi zomhlaba zisebenzisa i-Intanethi. Kungani lezi zilaleli zikhanga kangaka ebhizinisini lakho? Kungakhokha. Amashumi namakhulu ezinkulungwane zabasebenzisi nsuku zonke bafuna izimpahla zakho kodwa athole izimpahla zomqhudelwano. Lokhu kungenxa yokuthi izimbangi ezisebenza kahle kakhulu sezivele zithathe izindawo ezinhle kakhulu kwimiphumela yosesho. Ungathatha nezindawo elangeni. Ukuze wenze lokhu, kufanele uqale ukusebenza kweinjini zokucinga zewebhu.
Ngefomu elifushane nelifinyelelekayo, sizokuchazela izivakashi ukuthi wenzani. Ividiyo yokuphromotha yebhizinisi lakho izosiza ukuheha abathengi abasha futhi ikhulise ukuguqulwa.
Ukuhlaziya isiza sokuhweba
Ezimweni zanamuhla, imininingwane yigazi lebhizinisi. Ukuntuleka kwaso kuholela ekushoneni kwegazi emzimbeni. Ukuze uhlale wazi futhi ulawule ibhizinisi lakho, sebenzisa idatha yethu yokuhlaziya, futhi isibikezelo ngentuthuko yakho. Lawula ibhizinisi lakho online nochwepheshe bakwaSemalt!
Amakhasimende angaphezu kwezigidi ezintathu angaba nandaba nokuthenga umkhiqizo wakho. Kungani bengakwazi ukwenza lokhu? Izigidi zezimbangi ezingaba khona azikuvumeli ukuthi ungene ku-Google Phezulu. Phakamisela ibhizinisi ezingeni eliphakeme! Thola izindlela ezintsha zokuthengisa futhi uphumelele umncintiswano! Ungayenza kanjani? Khetha ochwepheshe bangempela abanolwazi olunzulu. Yiba yikhasimende leSemalt namuhla! Njengeklayenti, uzokwamukela iphakethe eligcwele lezinsizakalo, ezibandakanya ukuthuthukiswa, ukuqamba kabusha, kanye nokuphromotha kwesitolo sakho se-inthanethi, kanye nokuxhaswa kwezobuchwepheshe. Ngokukhetha uSemalt, ungaqhuba kalula ibhizinisi lakho eliku-inthanethi futhi ube ngu-NUMBER ONE.
Ochwepheshe abanolwazi bafisa ukubambisana nawe kunoma yiliphi izwe eMhlabeni, unyaka wonke, nganoma yisiphi isikhathi ngewashi. Lababantu bazokwazi ukuqonda imininingwane yanoma yiluphi uhlobo lwe-e-commerce.
Iphothifoliyo yeSemalt ifaka amacala angaphezu kuka-800,000 aqediwe kumakhasimende angaphezu kuka-300,000. Wonke amaphrojekthi ayatholakala kusisetshenziswa sethu.
Ukutshalwa kwemali okuncane ekuqhubekiseni phambili iphrojekthi yakho kanye nemiphumela emihle ngempela.
Sihlala simangaza amakhasimende ethu ngamanani aguqukayo namanani entengo anenzuzo.
Kuyini Ukusebenza Okugcwele Kwenjini Yokucinga?
Ibhizinisi lizobe liphethwe yimenenja yomuntu siqu neqembu lethu le-SEO. Sizohlola isiza sakho ukuthola izihlungi ze-Google futhi sithuthukise isu lokulandela. Phakathi kokunye, ochwepheshe bakwaSemalt bazokhetha amagama angukhiye kakhulu azodonsa izethameli ezingabhekiswa kuzo. Sizohlaziya ukwakheka kwendawo nokusatshalaliswa kwamagama asemqoka, kanye namakhasi akhethiwe wokunyuswa okulandelayo kwemishwana efanele. Kubalulekile ukuqoqa imininingwane ephathelene nezimbangi zakho ukuze uhlangane nazo zihlomile ngokuphelele.
Ungayisebenzisa kanjani kahle insiza eku-inthanethi?
Ukusizakala esitolo online online izimbangi, kufanele ususe imikhawulo evimbela ukukhushulwa. Sinikezela ngokulandelana kwezinyathelo ezizokubeka endaweni yokuqala:
ukudala amathegi e-meta ahambisana namagama angukhiye;
ukwenza ngcono ikhodi ye-HTML;
ukwenza amathegi nezimfanelo ukuthi amazinga wesimanje ezinjini zokusesha azofinyelela.
Ukusebenza futhi kusho ukuvala izixhumanisi eziphukile nokwakha inani eliphezulu lezixhumanisi zezinsizakalo ezikhuthaziwe. Ukuhlela ama-robots.txt kanye namafayela we-.htaccess kuzothuthukisa kakhulu ukubonakala kwesiza sakho kumakhasi wezinjini zokucinga.
Unamagama amakhulu kakhulu nemigomo, akunjalo? Ukukugcina uphume ekudidekeni nasekhanda, asikho kuhlu lapha zonke izindlela “zokwelapha”. Manje uyabona ukuthi kunzima kanjani ukuthatha indawo yokuqala yokuthengisa nokuthandwa kwiWorld Wide Web. Ukuphakanyiswa kwe-SEO kudinga ulwazi olukhethekile futhi kusekelwe kulwazi lwamaphrojekthi wangaphambilini. Iqembu labadlali abasebasha, abashukumisayo nabaphumelelayo balungele ukukusiza. Ngokubambisana sizokwethula umkhankaso ophumelelayo we-SEO futhi senze ibhizinisi lakho libonakale kubavakashi nakubathengi abazoba ngabathengi. Impumelelo kungenzeka. Ochwepheshe abanenhlanhla. Iqembu leSemalt lizoba injini yakho enamandla endleleni eya kudumo nokuchuma uma ufuna.
Ungahlala noma kuphi emhlabeni futhi ukhulume noma yiluphi ulimi. Ungalungisa imishini ye-Apple eMinsk noma uthengise indawo ethengiswayo e-USA. Ngokuqinisekile sizosithola isixazululo sebhizinisi lakho futhi sikhuthaze iwebhusayithi yakho. Siyazi ukuthi isebenza kanjani ngoba siyizithelo. Naka ibhizinisi lakho futhi asivumele silikhuthaze. Ngokubambisana sizofinyelela okuningi!